အင်ဒိုက ရခိုင်အတွက် လေယာဉ် နှစ်စင်းစာ ကယ်ဆယ်ပစ္စည်း ပေးပို့ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း အင်ဒိုက ရခိုင်အတွက် လေယာဉ် နှစ်စင်းစာ ကယ်ဆယ်ပစ္စည်း ပေးပို့
အင်ဒိုက ရခိုင်အတွက် လေယာဉ် နှစ်စင်းစာ ကယ်ဆယ်ပစ္စည်း ပေးပို့
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက ရခိုင်ဒေသအတွက် ပေးပို့လိုက်တဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၈၀,၀၀၀ ကျော်တန်ဖိုးရှိ လေယာဉ်နှစ်စင်းစာ ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေ စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်က ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိလာတယ်လို့ အစိုးရက သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားတပ်မတော်ပစ္စည်းသယ် လေယာဉ်နှစ်စင်းနဲ့ ပေးပို့လိုက်တဲ့ ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေထဲမှာ လူသုံးကုန်၊ ဆေးဝါး၊ စားသောက်ကုန်နဲ့ ယာယီမိုးကာတဲတို့ပါဝင်ပြီး အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကို ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဦးစီးဌာနကတဆင့် ရခိုင်ဒေသကို ဆက်လက်ပို့ဆောင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရအနေနဲ့ ရခိုင်ဒေသအတွက် တပ်မတော်ပစ္စည်းသယ် လေယာဉ်ခြောက်စင်းစာ အစား အသောက်၊ ဆေးဝါးနဲ့ လူသုံးကုန် ပစ္စည်းတို့ကို ဆက်လက် ကူညီထောက်ပံ့သွားဖို့ ရှိပါတယ်။
……………………. ။ ။ ………………….
အငျဒိုက ရခိုငျအတှကျ လယောဉျ နှဈစငျးစာ ကယျဆယျပစ်စညျး ပေးပို့
အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံက ရခိုငျဒသေအတှကျ ပေးပို့လိုကျတဲ့ အမရေိကနျဒျေါလာ ၂၈၀,ဝ၀ဝ ကြျောတနျဖိုးရှိ လယောဉျနှဈစငျးစာ ကယျဆယျရေးပစ်စညျးတှေ စကျတငျဘာ ၂၁ ရကျက ရနျကုနျ အပွညျပွညျဆိုငျရာ လဆေိပျသို့ ရောကျရှိလာတယျလို့ အစိုးရက သတငျးထုတျပွနျထားပါတယျ။
အငျဒိုနီးရှားတပျမတျောပစ်စညျးသယျ လယောဉျနှဈစငျးနဲ့ ပေးပို့လိုကျတဲ့ ကယျဆယျရေးပစ်စညျးတှထေဲမှာ လူသုံးကုနျ၊ ဆေးဝါး၊ စားသောကျကုနျနဲ့ ယာယီမိုးကာတဲတို့ပါဝငျပွီး အဲ့ဒီပစ်စညျးတှကေို ကယျဆယျရေးနဲ့ ပွနျလညျနရောခထြားရေး ဦးစီးဌာနကတဆငျ့ ရခိုငျဒသေကို ဆကျလကျပို့ဆောငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
အငျဒိုနီးရှားအစိုးရအနနေဲ့ ရခိုငျဒသေအတှကျ တပျမတျောပစ်စညျး သယျလယောဉျခွောကျစငျးစာ အစား အသောကျ၊ ဆေးဝါးနဲ့ လူသုံးကုနျ ပစ်စညျးတို့ကို ဆကျလကျကူညီထောကျပံ့သှားဖို့ ရှိပါတယျ။
Previous articleMCN နေ့စဉ် နိုင်ငံတကာ သတင်းအစီစဉ် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက် သောကြာနေ့
Next articleKNU ကော့ကရိတ်မှာ နိုင်ငံရေးသင်တန်း ဖွင့်